Iwu Ọhụrụ maka ndị ọbịa Canada: 10 steeti US ga -anabata ndị Canada aka abụọ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Iwu Ọhụrụ maka ndị ọbịa Canada: 10 steeti US ga -anabata ndị Canada aka abụọ
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • LGBTQ • Akụkọ na -agbasa ozi Mexico • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Ndị Mexico na ndị Canada nwere ike ịhazi ezumike America na United States. Dị ka ọnwa Nọvemba 1, Nchebe Obodo na US ga-emepe ndị na-ebu ala n'etiti ndị agbata obi US maka njem na-adịghị mkpa, gụnyere njem.
Houselọ White House gosipụtara n'abalị Tuesday na ndị ọbịa gbara ọgwụ mgbochi ọrịa si Canada ga -enwe ike ịga United States na oke oke ala ruo na Nọvemba 1.
Ekwupụtaghị kpọmkwem ihe ọgwụ mgbochi a ga -anabata ma ọ bụ ọ bụrụ na ngwakọta agwakọta ga -etozu.
Oke US maka ndị ọbịa Mexico ga -emepe na Nọvemba 1
Ndị na -enye ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ma na -achọ ileta ezinụlọ ma ọ bụ ndị enyi na -abịa dị ka ndị njem ma ọ bụ ndị na -azụ ahịa ga -enye ohere ịbanye United States ọzọ ruo Nọvemba.
Onye isi ala US Biden welitere mmachibido iwu yiri nke ahụ maka ndị ala ọzọ na -achọ isi mba ofesi, gụnyere Europe, na -eme njem na mba ahụ.
Otu ibuli mmachi a ga -emetụta oke ala n'etiti United States na Mexico.
Nke a bụ mmegharị nnabata maka ịmalitegharị ụlọ ọrụ International Travel and Tourism.
Tupu oria ojoo a na 2019, enwere ihe dị ka nde ndị ọbịa 20.72 si Canada na United States.
Ihe karịrị nde ndị Canada 4.1 na-eleta Florida kwa afọ gụnyere ọtụtụ ndị ọbịa dị mkpirikpi na ọtụtụ nnụnụ snow n'oge oyi.
Ihe karịrị nde ndị Canada 3.1 na -eleta New York kwa afọ. Ihe na-adọrọ mmasị #1 bụ n'ezie New York City, Otu n'ime obodo kachasị ukwuu n'ụwa, New York na-abụkarị mmegharị nke ọrụ, yana saịtị ndị ama ama n'oge ọ bụla na enweghị oge zuru oke iji hụ ha niile gụnyere ihe ngosi Broadway, klaasị ụwa. ịzụ ahịa, ihe akpụrụ akpụ nke nnwere onwe, Building State Building, Brooklyn Bridge, Central Park na ọtụtụ ebe ngosi nka ama ama n'ụwa.
Ihe karịrị nde ndị Canada 2.5 na -eleta steeti Washington kwa afọ site na iji ohere ịnya ụgbọ ala nke dị nso na mpaghara British Columbia. Seattle bụ ọnụ ụzọ mpaghara Pacific Northwest, ebe oke ugwu dị ịtụnanya na -ele anya n'oké ọhịa oke ọhịa na oke osimiri dị egwu. Ogige ntụrụndụ mba abụọ, Ugwu Rainier na Olimpik, na -enye mkpakọrịta dị egwu na okike dịka agwaetiti San Juan dị n'ụsọ oké osimiri.
Ihe karịrị nde ndị Canada nde 1.6 na -aga California kwa afọ. Obodo ndị mara mma, osimiri, ogige ntụrụndụ, na ihe ịtụnanya ebumpụta ụwa dịka enweghị ebe ọzọ n'ụwa na -eme ka California bụrụ ala na -adọrọ mmasị nke ndị njem. Obodo ọnụ ụzọ ámá nke San Francisco na Los Angeles bụ ebe ụfọdụ saịtị ama ama nke steeti ahụ, site na Golden Gate Bridge ruo Hollywood na Disneyland.
Ihe karịrị nde ndị Canada 1.3 na -aga Nevada kwa afọ, ọtụtụ na -abata na Las Vegas. Okirikiri ala Nevada dị ịtụnanya na -egbu maramara ma na -egbu maramara nke nnukwu obodo ya, Las Vegas. Nevada bụ ọnọdụ dị iche iche nke okike dị ịtụnanya, nwere ọtụtụ ọmarịcha ebe ị ga -eleta, draịvụ ihe nkiri, na ohere dị ebube maka ihe omume n'èzí n'ogige ntụrụndụ mba ha dị ịtụnanya na mpaghara ntụrụndụ.
Ihe karịrị nde ndị Canada 1.3 na -aga Michigan kwa afọ na ọtụtụ ndị njem oge ọkọchị na -agbada Ontario. Michigan bụ ebe obibi mara mma, ọdọ mmiri ndị dị ebube, nri dị ịtụnanya, mpaghara dị iche iche na ihe bara nnukwu uru. Steeti a dị ịtụnanya nwere 4 nke Oké Osimiri Ukwu ma nwee ihe karịrị ọdọ mmiri dị n'ime 11,000, gbasaa na ala ala ala ya na elu ya na -eme ka ọ bụrụ ebe okpomọkụ maka ndị Canada.
Ihe karịrị nde ndị Canada 1 na -eleta Arizona kwa afọ site na ndị ọbịa dị mkpirikpi ruo ogologo nnụnụ snow. N'ime obi Ndịda Ọdịda Anyanwụ America, Arizona jupụtara n'ihe ịtụnanya ebumpụta ụwa, obodo ndị mara mma, na obere obodo mara mma. Steeti a nwere ihe niile site na Grand Canyon, nkume na -acha ọbara ọbara Sedona, obodo mmanya, ọdọ mmiri dị egwu, oke ugwu, ugwu ski oyi, ihe egwuregwu egwuregwu ụwa na n'ezie ihu igwe dị ịtụnanya.
Ihe karịrị ndị Canada 800,000 na -eleta Hawaii kwa afọ. Agwaetiti Hawaii ama ama maka oke mkpọda ugwu ha, nsụda mmiri, akwụkwọ ahịhịa na oke osimiri nwere ọla edo, ọbara ọbara, ojii na ọbụna aja akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Afọ gbara gburugburu ihu igwe zuru oke yana ibi ndụ mara mma mara mma emeela ka Hawaii bụrụ ụzọ mgbapụ oyi maka ndị Canada! Agwaetiti isii pụrụ iche na -enye ahụmịhe pụrụ iche nke ga -arata onye njem ọ bụla.
Ihe karịrị ndị Canada 750,000 na -eleta Maine kwa afọ. Ihe dị ka otu onye n'ime mmadụ isii ọ bụla na -eleta Maine si Canada, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara n'ime ndị ahụ si Ontario. Steeti Maine, nke a na -akpọ Vacationland, karịrị ebe njedebe, ọ bụ ahụmịhe nke ga -ewepụ ume gị. Maine na-anabata ihe niile bụ eziokwu, pụrụ iche ma dịkwa mfe, na-anụkwa oghere sara mbara nke oke ọhịa steeti na oke osimiri dị egwu.
Ihe karịrị ndị Canada 680,000 na -eleta Pennsylvania kwa afọ. Obodo ndị mara mma nke Pennsylvania na nnukwu ebe nkiri dị n'èzí na -akpọ gị oku inyocha nnukwu ọrụ dị iche iche. Ị nwere ike ịhụ Liberty Bell a ma ama na Filadelfia, na -eje ije na nzọ ụkwụ nke ndị dike agha obodo dara ada na Gettysburg, ma ọ bụ tinye ụfọdụ omenala na Carnegie Museums na Pittsburgh.